Green Tea Sencha 1000g (10g x 100 pcs) ဂျပန် လက်ဖက်ခြောက် – YURI Japanese Food Online Shop
Home › Green Tea Sencha 1000g (10g x 100 pcs) ဂျပန် လက်ဖက်ခြောက်
Green Tea Sencha 1000g (10g x 100 pcs) ဂျပန် လက်ဖက်ခြောက်
Default Title - K-25,000 MMK Quantity
ဂျပန် Green Tea (Sencha TeaBags)
100% သဘာဝအော်ဂဲနစ် ဂျပန် Green Tea (Sencha TeaBags)
Sencha ဆိုတာ ဂျပန် ရေပူနဲ့ သောက်ရတဲ့ ဂျပန်Green Tea ရဲ့ အခေါ်အဝေါ် တစ် မျိုး ဖြစ် ပါတယ် ။ Green Tea အမျိုးအစားများ ထဲမှာ 80% လူကြိုက်ပိုများပါတယ်.
တစ်ချို့ကဂျပန် sake လေးနဲ့စပ်သောက်ကြပါတယ် ...
.Green Tea ရဲ့ အဟာရတန်ဖိုးများကတော့ အများစုသိပြီးသား အချက်များပါ
၁.အဆီပိုများကို ဖယ် ထုတ်ပေးပြိးကိုယ်အလေးချိန် ကို
၂.ဆီးချို ရောဂါကိုသက်သာစေပြီး မဖြစ်ရန် လည်းကာကွယ်ပေးပါ
၅.သွေးတွင်းကိုလက်စထရော ကို လျှော့ချပေးပါသည်
၆. ဦးနှောက်ဆဲလ်များအသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုအားပေးပြီး စိတ်ပင်ပန်း
နွမ်းနယ်မှု့ကို ပယ်ဖျော်ပေးပါသည်၊စိတ်ရွှင်လန်းစေ ပါသည်၊
၉.စိတ်တည်ငြိမ်မှု့ ရရှိစေပြီး စိတ်ကျရောဂါကိုအ ထူးကာကွယ်ပေးပါ
LIFESTYLE BY CIARA CONLON
Sencha အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်တွင် အထုပ် ၁၀၀ပါဝင်ပါသည် (၂၃၇၅၀ ကျပ် )
၁၀ထုပ် စာအထုပ်ငယ်များလဲရှိပါသည် ။ (၂၅၀၀ ကျပ် )
အထုပ်တစ်ထုပ်လျှင် ဓါတ်ဘူး တစ်အိုးစာရပါသည်
ရေနွေးပူပူတွင် ဓါတ်ဘူး တစ်ဘူး Secncha တစ်ထုပ် ထည့် ထားပြီး အအေး ခံထား ၍ အအေး အဖြစ်လဲ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည် ။
ဂျပန် Sake , Vodka , Gintonica စသည်တို့ဖြင့်လည်းတွဲဖက် ရောစပ် ပြီး အရသာ သစ် အဖြစ် ဖန်တီး သောက် သုံးကြပါသည်။
SenCha မှာ လေထုထဲက ပါဝင်တဲ့ ခန္ဒာကိုယ် ဓါတ်မတည့် စေတဲ့ ဓါတ်သဘာဝတွေ ကိုလဲ ချေဖျက်ပေးတယ် ဆိုပါတယ်
2006 ခုနှစ် အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစည်း အရုံးများ ဂျာနယ် တွင် Green Tea မှာပါဝင်တဲ့ polyphenols ဒြပ်ပေါင်း တစ်မျိုး က နှလုံးရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် အထူး အထောက် အကူပြု ကြောင်း တွေ့ရှိချက်ကို Shinichi Kuriyama, MD Ph.D ကသုတေသနပြု ပြိးဖေါ် ထုတ် ရေးသား ခဲ့ပါတယ်
Japan နိုင်ငံ Tohoku University School of Medicine ဆေးသုတေသနာ ဌာနကလည်း green Tea သောက်သုံး ခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါ ကြောင့် သေဆုံးမှု့ကို လျှော့ချနိုင်ကြောင်း ကို တွေ့ရှိ့ခဲ့ပါတယ်
Green Tea သောက်သုံးခြင်းဖြင့် လေဖြတ် ရောဂါကို ပါ ကာကွယ်နိုင်သည်ဟုဆိုပါတယ်...
Green Tea နေ့စဉ် ၁၀ ကော်ဖီခွက် ၁၀ ခွက်ကျော် သောက်သုံး သူများက လေဖြတ်ခြင်းကို ၄၀ % ကာကွယ်နိုင်ပြီး နှလုံးရော ဂါကြောင့် သေဆုံးရခြင်းကို 28 % နှုန်း ချော့ချပေးကြောင်း အခိုင်အမာသုတေသနာပြု တင်ပြခဲ့ပါတယ်...
အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါကို လည်း Green Tea ထဲမှာပါတဲ့ polysaccharides နှင့် polyphenols နဲ့ 33% ရာနှုန့်းထိ လျော့ချနိုင်တယ် လို့သုတေသနပြု တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်..
အဓိကကတော့ထုတ်လုပ်မှု့သန့်စဉ်တာ အရောအနှော ဆိုးဆေး မပါတာ တွေ ကြောင့် ဂျပန် Green Tea က ပိုလူသုံးများ အကြိုက် များကြပါတယ် ...
နဲ့ Yurionlineshop.com ကနေ လဲ တိုက်ရိုက်မှာလို့ရပါတယ် ရန်ကနု်မြိုတွင်းဆို နအိမ်တိုင်ရာရောက်လာပို့ပေးပါတယ် ပို့ခ 1500 ကျပ် ပါ နယ်ဆို ကားဂိတ်က ပို့ပေးပါတယ် ပို့ခ 2500 ကျပ်ပါ
01-2331409 , 09-4444-55849 , 09-4444-55843 ,
MAB ဘဏ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် မှာလဲ လာရောက် ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်
အပူအအေး ၂မျိုးလုပ်သောက်၍ရသော ဂျပန် လက်ဖက် ရည်ဖြစ်ပါသည်။ ပူပြင်းသောရာသီတွင်အအေးအဖြစ်သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်၊ စိတ်ရွှင်လန်းစေပီးကိုယ်တွင်းအဆီများကိုပယ်ဖျက်ပေးပါသည်၊
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုပြေပြောက်စေပီးစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသော ဖျော်ရည်အဖြစ် ဂျပန်လူမျိုးများသောက်သုံးကြပါသည်။
ပုံမှန်သောက်သုံးပါက ဝမ်းမှန်ပြီး သိသိသာသာ ဝမ်းဗိုက်ချပ်ရပ်ကာ အဝလွန်ခြင်း အဆီတိုးခြင်းကို ကာကွယ်ပါသည်၊ ဆီး၊ ဝမ်းမှန်စေပြီးကိုယ်ခန္ဓ္ဓ္ဒ္ဒာပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါသည်.
အထုပ်ကြိးတစ်ထုပ်တွင် အထုပ် ငယ်၁၀၀ ပါဝင်ပါသည်
ရေဘူး ၁လီတာ ဘူး ထဲတွင် အထုပ်ငယ်တစ်ထုပ်စိမ်
ထားပြိး ပုံမှန်ရေအေးကဲ့သို့သောက်သုံး၍လဲရပါသည် အဆီကိုသိသာစွာကျစေသည်